मुर्दाहरूको सहर | काव्यालय
मुर्दाहरूको सहर | SATURDAYकलम | काव्यालय - Kavyalaya
by रमेश भण्डारी September 26, 2020
सुनसान रात, निस्पट्ट अँध्यारो, नदीको किनार, एकातिर काँडै-काँडाको घारी अनि अर्कोतिर डरलाग्दो जंगल । कालो अन्धकारलाई चिर्ने दुष्प्रयास गर्दै झ्ल्याक-झुलुक देखिने केही धुँवाको मुस्लो जस्तो त केही कंकाल जस्तो आकृतिले मनमा उत्पन्न माहोल देख्दा लाग्दथ्यो म नर्कमै छु । त्यो सुनसान रातमा अचानक एकैचोटि थुप्रै आवाजहरू कानमा तरंगित हुन पुग्छ्न् । कोही आफ्ना रिस, क्रन्दन अनि कोही दु:ख लाग्दा गरिने आर्तनाद निकालेर चिच्याइरहे । यो यहाँ के भइरहेको हो ? यस्तो त आजसम्म भएको थिएन । एकैछिनमा सबै आवाजहरू शान्त भए, अनेकौं डरलाग्दा छाला र मासुविहीन कंकालहरूले मलाई वरिपरिबाट घेरे ! अघिसम्म कता कता यस्ता आकृति देखिँदा भ्रम थियो भनेर आफूलाई शान्त राखेको थिएँ तर आफैलाई घेर्दा भने म केही गर्न सक्ने अवस्थामै थिइनँ । कंकालहरूको भिडबाट एउटा दमदार आवाज आयो, “वेलकम टु हेल, माइ बोय! नाव, यू ह्याव केम टु दिस ब्युटिफूल सोसाइटी फ्रम द्याट फकिङ वर्ल्ड । वि अल आ हियर फो योर वेलकम ! नाव यू आ अल्सो अ पार्ट अफ दिस सोसाइटी ।” त्यो आवाज रोकिने बित्तिकै चारैतिरबाट फेरि हल्लाको आवाज आयो। अघिसम्म त म शंकाको कठघरामा मात्र थिएँ तर अब म ढुक्क भएँ, म नर्कमा नै रहेछु अनि यतिका कंकाल र धुवाँजस्तो देखिने आकृति मेरो स्वागतको लागि उपस्थित थिए ।
बाल्यकालदेखिकै हितैसी मित्र ऊ, मेरो एउटा साथी मात्र नभई भाइसमान थियो। सानोछँदा सँगै गुच्चा खेल्ने, स्कुलबाट भागेर पौडी खेल्न जाने, भलमानसाको बारीबाट कहिले फलफूल त कहिले भोगटे चोरेर साँधेर खाने, भेल्लरका रुखका दानाहरूलाई गोली बनाई खेल्ने, इँट्टा फोर, चोर पुलिस, मोजाको फुटबल खेल्नेदेखि लिएर एक-अर्काको निम्ति अरुसँग झगडा गर्न जाने समेत गर्दथ्यौँ हामी । ती सबै सम्झनाहरू आजभोलि हरेक रात मलाई बिथोल्न आइरहन्छन् । सायद अन्तिम समयतिर काठमाडौंमा निर्मलसँग ६ महिना नबिताएको भए अलिकति भएपनि उसका सम्झनाहरूले पिरोल्न कम गर्थे होला ।
मलाई हिजो जस्तै लाग्छ, ऊसँग रत्नपार्कमा भेटेको, पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुको साथै आरती हेरेको, हाँसोमजाक गर्दै दिन बिताएको । उसले भन्ने गरेको कान्तिपुर नगरी बस्दाका एक-एक कुराहरूले मनमा छुरा रोपेझैं अनुभूति दिलाउँछ । मैले किन उसलाई यो लकडाउन भरिमा सम्झाउन सकिनँ ? मैले आखिर त्यस्तो उपलब्धिमुलक के नै पो काम गरेँ र ? बरु त्यो समय म ऊसँग बिताइदिन्थे त उसले मनका कुरा राख्न त पाउँथ्यो । उसले यति कठोर निर्णय त गर्दैन्थ्यो होला भन्ने सोचहरूले बारम्बार निर्मलको आत्महत्या पछाडि अपत्यारिलो पाराले म स्वयं नै कारण हुँ भनेर दोषी ठहराइरहन्छ । उसले संसार छाडेपछिको मेरो जीवन निरस, उजाड अनि एक्लो भएको छ । मेरो हालत मरुभूमिमा पानी नपाएर छ्टपटाइरहेको उँटको जस्तै भएको छ । मैले हरेक दिन आफूले आफैँलाई ग्लानीको रापमा पिल्साइरहेको हुन्छु अनि हरेक रात उसको यादको हुरी समुन्द्रमा आउने सुनामी बनेर आउँछ र म बबुरोलाई तहसनहस पारेर निद्रा खोसेर लैजान्छ ।
ऊ गएपछि गाउँमा हरेकका बुवाआमाले आफ्ना सन्तानलाई सम्झाउन थालेका छ्न् अनि केही समय निकालेर दुःख सुख साट्न थालेका छ्न् । गाउँले एउटा निर्मल त गुमाइसक्यो तर अरुलाई त्यो बाटोमा हिँड्नबाट रोक्न पर्छ भनेर सबै लागेका छ्न् । हरबखत बुवा मलाई सम्झाइरहनुहुन्छ, “जे हुनु थियो भइसक्यो, अब त्यसलाई बदल्न सकिँदैन । तँ धेरै नसोच्, त्यो मेरो पनि छोरो समान थियो । जानेले त सजिलै छाडेर जान्छ्न् तर सक्दैनन् लैजान आफूसँगका याद र सम्झना, ती सबै कुरा भोग्नुपर्नेले धेरै पीडा सहनुपर्छ ! बिर्सेर पनि त्यतातिर सोच्ने होइन, नियतिलाई कसैले बदल्न सक्दैन । कसरी हुन्छ, आफूलाई व्यस्त बनाइराख् । खाली दिमाग सैतानको घर भन्छ्न् । बरु गाउँका केटाकेटीहरूलाई पढाएर बस तर अनावश्यक कुरा मनमा डुलाएर आफूलाई कमजोर नबना ।”
“तिमीलाई यो हाम्रो वास्तविक संसारमा हृदयदेखि नै स्वागत छ । आजबाट तिमीलाई जि. न. २५ बाट चिनिनेछ। आश्चर्य मान्नपर्दैन यहाँ सबैको नाम यस्तै कोडबाट राखिन्छ । जीवित नम्बर २५, अब यो कति औं २५ हो त्यो भने थाहा भएन्। तिम्रो त्यो नर्कमा (तिमीले छाडेर आएको ठाउँ)के नाम थियो त्यसले यहाँ कुनै मान्यता राख्दैन।”, एउटा कंकाल मलाई मेरो चिनारी दिँदै थियो।
“सुरुमा यसलाई यहाँको वास्तविकता त बुझाइदे। तँलाई हामीले कसरी सम्झाएका थियौँ, त्यसैगरी सम्झा त ! सुरुमै अतालिने नबना।”, केही बूढो बोलीमा एउटा कालो आकृतिले त्यस कंकाललाई सम्झायो।
“ल सुन्। यो हरेक व्यक्तिको मरणपछि आउने ठाउँ हो । तिमीले जीवित रहँदा सुनेका होलाऊ नि, मृत्युपश्चात नर्कमा परिने हो कि स्वर्गमा के थाहा भनेको त ! वास्तवमा नर्क या स्वर्ग भन्ने केही चिज हुँदैन । मृत्युपछि सबै आउने ठाउँ यही हो, कोही यहाँबाट केहीबेरमै विलीन हुन्छ्न् त कोही यहाँ लामो समयसम्म बसेर विलीन हुन्छ्न् । जो-जो यहाँबाट विलीन हुन्छन् तिनीहरूले अर्को नयाँ शरीरमा आफ्नो आत्मालाई राख्छ्न् र नयाँ जीवनको सुरुवात गर्छन् । आत्मा कहिल्यै मर्दैन, यो त एउटा जीवबाट अर्को जीवमा जान्छ । यसरी नै चलिरहेको छ यो सृष्टि। म जीवित रहँदा पूर्वजन्मको किस्साहरू सुन्थेँ, त्यो साँचो रहेछ भनेर यहाँ आएपछि थाहा भयो । यहाँ जति कंकालमा भएकालाई देख्छौ नि ती सबै नजलाइएका लासहरू हुन् । म संकटकालको युद्धमा सहादत पाएको योद्धा हुँ, मेरो नाम बेचेर करोडौं कुम्ल्याउनेहरूलाई मैले यहाँबाट देख्न भने सक्छु । तिमीले त्यो नर्कमा के भइरहेछ सबै देख्न सक्छौ तर गर्न भने केही सक्दैनौँ । त्यसबेला मेरो लास पुरिएको थियो, त्यसैले म यस्तो छु। तिमी जलाइएका थियौ, तिमी कालो धुवाँको आकृतिझैं देखिरहेका छौ । यहाँ बोलिरहेको हाम्रो आत्माले हो। हाम्रो आवाज त्यो नर्कसमान संसारका मानिसले सुन्न सक्दैनन्।” कंकाल मलाई सम्झाउँदै थियो।
उसको कुरालाई बिचैमा काटेर ती वृद्धको आत्मा बोल्न थाल्यो, “सबै जीवको एउटा निश्चित आयु हुन्छ । यदि त्यो आयु त्यस संसारमा पूरा भएन भने यहाँ आएर त्यो पूरा गर्नुपर्छ, अनि मात्र त्यस आत्माले मुक्ति पाउँछ । जो यहाँबाट केहीबेरमै विलीन हुन्छ्न् उनीहरूले आफ्नो आयु त्यस संसारमा पूरा गरिसकेका हुन्छन् । मलाई मेरो छोराले बूढो भएपछि सम्पत्तिको लालचमा घाँटी थिचेर मारिदियो। म मेरो आयु त्यस संसारबाट बिदा भएता पनि यहाँ आएर काटिरहेछु । आत्महत्या गर्ने, रोग-व्याधिले च्यापेर मर्ने, गोला-बारुद, बाढी-पहिरो, दुर्घटना, बलात्कार, इत्यादि कारणले जीवन गुमाउने सबैले यहाँ आफ्नो निश्चित अवधि पूरा गरेर आत्मालाई मुक्ति दिएर नयाँ जन्मको निम्ति तयार गरिदिन्छ्न् । यसरी नै चलिरहन्छ यहाँको संसार ।”
पचासौं वसन्त पार गरिसकेर दिन प्रतिदिन जिर्ण बनिरहेका विरबहादुर काकाको त्यस निर्जन घरमा छोराको यादमा बस्नुपर्ने दिन पनि आयो, जुन उनले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् । निर्मल सानै छँदा सहयात्री गुमाएका उनले कहिल्यै पनि आमाको कमी हुन नदिई जेनतेन हुर्काई बढाई उसलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाएका थिए । “गरीबका घरदेखि त ईश्वर पनि पर भाग्दा रहेछ्न्, कान्छा ! उः बेलामा गाउँका सबैले अर्को बिहे गर, तँलाई जिन्दगी काट्न सजिलो हुन्छ, एउटा छोराको भर हुँदैन है ! भन्दा मेरो सहारा अनि जीवन यही छोरो हो । यसको अनुहार हेरेर अगाडि बढ्छु, यसलाई आमाको मायाको कमी हुन दिन्नँ भनेर यत्रो बढाएँ । मैले उसलाई आमाबाबु दुवैको माया दिएर हुर्काएजस्तै लाग्थ्यो, अहिले आएर त्यसले मलाई गलत साबित गरिदियो । आखिर मैले के पाप गरेको थिएँ र यति भयानक सजाय भोग्नुपर्‍यो । म त निभ्न आँटेको दियो थिएँ, त्यसबाट तेलजति सबै निकालिदिएपछि कतिबेर नै पो बल्छ र ? धेरै दिन पक्कै पनि छैनन् अब म यहाँ रहने, कहीँ कतैबाट मेरो यो अवस्था देख्दा पीडा त त्यसलाई पनि पक्कै हुन्छ होला । म त्यो जस्तो कायरको मृत्यु भने मर्ने छैन । हलो जोतेर हुन्छ या गिट्टी कुटेर, सकुन्जेल गर्छु नै ।” चाउरी परेका गाला तन्काउँदै विरबहादुर काकाले मलाई आफ्ना वेदना सुनाए ।
झट्ट हेर्दा ६० कटिसकेका जस्तै देखिने काका सकी नसकी काम गर्दै गुजारा चलाउँदै थिए। जुनबेला सबैभन्दा बढी आवश्यक्ता थियो एउटा लाठीको त्यसैबेला त्यो लाठी भाँचिएको थियो । बाध्य थिए काका सुनौला दिन ल्याउँछ छोराले अनि आफ्ना रंगिन सपना पूरा गरिदिन्छ भन्ने आशाको टुकी निभाउन । साँच्चै, जरा नै आधी उप्किसकेको बुढो रुख कति समय पो ढुङ्गाकै भरमा अडिन सक्छ र ? अलिकति ठूलो हावाले त्यस रुखलाई तहसनहस पार्न सक्थ्यो अनि त्यस रुख सँगै अन्त्य हुन्थ्यो एउटा युगको, दर्दनाक समयको साथै बलियो आत्मबलको पनि !
“शरीर क्षणिक अनि भौतिक हो । सायद आत्मालाई शरीरबाट मुक्त गर्दिने चेष्टाले नै गर्दा आफ्नै हातले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुलाई आत्महत्या भनिएको होला । जिन्दगीबाट हरेस खाएर आत्महत्या कसैले गर्दैन, संसारदेखि विरक्तिएर न हो आत्महत्या गरिने । हो, मैले पनि संसारबाट विरक्तिएर त्यो कदम चालेको थिएँ । जब नातावाद र कृपावादमा आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र जागिर दिइन्छ, ज्याला मजदूरी गर्नेलाई ती सबै कामबाट वञ्चित गराइन्छ । केही पैसाको बिटोमा इमान्दारी खरिदबिक्री गरिन्छ। दिन प्रतिदिन महंगी बढ्छ तर मजदूरको मजदूरी मोल बढ्दैन । सधैँजसो निराशामै जीवन व्यतित गराउनुभन्दा नर्कसमान लाग्न थालेको संसार छाडने निर्णय गरेको थिएँ मैले । गलबन्दीको पासोमा घाँटी राख्दा मलाई बुवाको यादले, मैले यो कदम चालेपछि उहाँको अवस्था के होला ? कसरी उहाँ खुसी रहनुहोला ? कसरी उहाँले फेरि जीवनयापन गर्नुहुन्छ होला ? भन्ने पिरले च्यापेको थियो तर एकदिन त सबैले संसार त छाड्नै छ, त्यसबेला पनि कसै न कसैलाई दुःख त पक्कै पर्छ। न त अरुको निम्ति बाँचिएको हुँदो रहेछ, न अरुको निम्ति मरिन्छ नै ! म त्यो मानवता हराएको संसारमा मानव भएर जिउने फगत कोसिसमा असफल भएँ तसर्थ आज तिनै मानवले भन्ने मुर्दाहरूको सहरमा छु।”, मेरो आत्मा बोल्यो!
“हा,हा,हा !”, एक महिला हासोँ गुन्जियो। “यहाँ जो जो आउँछन् ती सबै जीवित हुन् अनि मुर्दाहरूको सहर यो होइन। हामी सबैले छाडेर आएको ठाउँ जुन हो, त्यो नै हो वास्तविक मुर्दाहरूको संसार। एउटै सहरमा बसेर एक-अर्काको प्रगतिमाथि डाहा गर्ने अनि खुट्टा तान्ने मानवहरू मुर्दा हुन् । सम्पन्नताको खोल ओढेर दिनदुःखीहरूलाई हेप्ने र दुरदुर गर्नेहरू गरीब र मुर्दा हुन् । सम्पत्ति र शक्तिको निम्ति आफ्नै बाबुको घाँटी थिच्न नहिच्किचाउने कपुतहरू जिउँदो लास हुन्। बाटोमा हिँड्ने एक अबोध बालिकादेखि वृद्ध नारीमाथि कुदृष्टि लाउने र बलात्कार जस्तो निच हरकत गर्ने नामर्दहरू त्यो पृथ्वीका भारहरू हुन् । हामीले छाडेर आएको संसार यस्तै काम गर्नेहरूले भरिएको छ । यदि त्यो मुर्दाहरूको सहर नभएको भए कसैले आत्महत्या पक्कै गर्दैनथे होला । हामी त एक-अर्कालाई सहयोग गर्ने अनि एकअर्कामा सद्भाव बाँड्ने जीवित आत्माहरू हौँ । म सानै छँदा मेरो बलात्कार गरेर हत्या गरिदिएका थिए केही नरपिशाचहरूले । म यहाँ बसेर मेरी आमाको दुख हेर्न मात्र सक्छु, जसले आजसम्म मेरो हत्यालाई न्याय दिलाउन संघर्ष गरिरहनु भएको छ । त्यो संसार दुःखै दुःखको भवसागर हो । केही सज्जन र वास्तविक जीवित मान्छेहरू पनि छन् त्यहाँ तर एकदमै कम ।” उसको आत्मा त्यतिमै रोकियो ।
“कस्तो अनौठो कुरा छ है यो ? यहाँ आएका लासहरू बीच न छुवाछूत हुन्छ, न जात भात बीचको आपसी कलह, न भ्रष्टाचार भन्ने कुरा उठ्छ न त धर्मको कुरा नै । यहाँ हरकोही मिलेर बसेका छ्न् । यो सबै हुनुको मुख्य कारण यहाँ आत्माहरूले स्थान पाएका छ्न् । सबैको भौतिक शरीर लोप भइसकेको छ । जबसम्म शरीरको मोहबाट एक कदम अगाडि बढिँदैन तबसम्म जीवित भएर बाँच्न सकिँदैन । सायद त्यो कुरा त्यो संसारमा भएका हरेक मानिसले बुझेका पनि छ्न् तर त्यो कार्यान्वयन कसैले गर्दैनन् । म त्यहाँ हुँदा मैले पनि करोडौंको भ्रष्टाचार गरेको थिएँ तर म मान्छे भएर कहिल्यै जिउनै सकिनँ । अहिले त्यो कार्यको लागि पश्चाताप छ, सायद यहाँ आएपछि सबैलाई त्यस्तै नै हुन्छ होला । म त्यो मुर्दाहरूको सहरको एक नामुद नेता थिएँ।” अर्को एउटा आत्माले आफ्नो कहानी सुनायो ।
एउटा गहिरो निन्द्राबाट बिउँझिएझैं भान भयो मलाई । के यो संसारभन्दा बाहिर अर्को पनि संसार छ होला त ? के मृत्युपछि पनि कंकालहरू बीच यो संसारको बारेमा संवाद चल्छ होला त ? भलै जे सुकै होस् तर त्यो संसारमा भएका धेरै कुराहरूले मन भाँडियो । वास्तवमा मुर्दा भनेका मरे समानका मान्छेहरू नै हुन। आजभोलि त झन् यो संसारलाई नर्क बराबर बनाउने होडबाजी नै चलेको छ । विकसित राष्ट्रहरू विभिन्न किसिमका आधुनिक हातहतियार, नयाँ नयाँ आणविक बम, गोला बारुद बनाउन र युद्ध गर्न अग्रसर छ्न्। कहाँ हरायो मानवता ? कहाँ गयो एक अर्काबीचको सहिष्णुता ? तँभन्दा म बलियो, तँभन्दा म धनी भन्दै विलासितामा रमाउन खोज्ने मानवहरूबीच दया, माया, भाइचारा अनि सहयोगको अपेक्षा गर्नु भनेको पहाड एक्लै फोडेर बाटो बनाउँछु भन्नु बराबर हो ।
यी त भए धेरै परका कुरा, अब हाम्रै गाँउघर र सहरमा हुने कुराहरू सम्झौँ न, एउटा मान्छे अन्यायमा परेको छ, उसमाथि गलत भइरहेको देख्दा देख्दै अर्को मुकदर्शक भएर बस्छ। बाटोमा कसैको दुर्घटना हुँदा सहयोग गर्नुको साटो मान्छे मोबाइल निकालेर भिडियो खिच्न थाल्छ । यस्तो विघ्न क्रुर र ढुंगाको मुटु कसरी बनाउन सकेका के हामीले ? भोका र नाङ्गा बाटाभरि देखिन्छ्न्, हामी मन्दिरमा गएर पैसा दान गर्न राजी हुन्छौँ तर तिनीहरूलाई दिन सक्दैनौँ। ढुङ्गाको मुर्तीलाई पुज्छौँ तर त्यही बनाउनेलाई त अछुत होस् भन्दै त्यसले छोएको पानीलाई अपवित्र ठान्छौँ। जहाँ उसको कला अनि पसिना अपवित्र हुँदैन त्यहाँ त्यो स्वयं अपवित्र कसरी हुन सक्छ ? विश्वकर्मा पूजामा फलामको पूजा गर्ने हामी विश्वकर्मा थर भएकालाई मान्छेको व्यवहार गर्दैनौँ अनि कसरी हामी जीवित भयौँ ? दिनदिनै आफ्नै आँखा अघि आफ्नै बहिनी र आमासमान नारीको इज्जत लुटिन्छ, हामी मौन बस्छौँ मुर्दासमान । अझै त्यतिले नपुगेर त्यो त हाम्रो मान्छे हो भन्दै अपराधीलाई बचाउनतिर लाग्छौँ हामी ।
देशमा दिन प्रतिदिन विकासले ओरालो हालेको छ, हामी मौन छौँ, नेताले काम गरेनन् भन्दै बस्छौँ तर हामी स्वयंले केही गर्दैनौँ। कहिले झाडापखाला त कहिले हैजाले हजारौं मान्छे मरिरहेका हुन्छन् यता सरकार भ्रष्टाचारमा व्यस्त हुन्छ। कोरोनाको यस्तो विषम परिस्थितिमा देशभरी लकडाउन गर्दै करोडौंको भ्रष्टाचार हुन्छ अनि कसरी हामी आफूले आफूलाई जीवित भन्न सक्छौँ। हो, हामी सबै मुर्दासमान भइसक्यौँ । प्रत्येक पटकको चुनावमा मासु र रक्सीमा भोट हालेर हामी प्रतिनिधि छान्छौँ अनि काम गरेनन् भनेर गाली गर्छौँ। एउटा बाहुनको छोरो, भ्रष्टाचार र आरक्षणको चपेटामा पिसिएर मर्छ अनि अर्को दलितको आरक्षणमा आफ्नो मानिस छिराई उसलाई जीउँदै मारिन्छ तर हाम्रो अहंकार मर्दैन। एउटा गरीब खान नपाएर आत्महत्या गर्न विवश हुन्छ तर हामी भ्रष्टाचार गर्नमै हराइरहन्छौँ । मानवता त कुन चरी को नाम हो भन्ने भइसकेको छ यो संसारमा अनि यो संसार र सहरलाई मुर्दाहरूको सहर नभनेर के भन्ने?
हजुरलाई के लाग्छ म जान्दिनँ, तर मानवता मेटिँदै गएको अनि देखावटी र बनावटी मौलाउँदै गएको यो सहरमा म हरकोहीलाई मुर्दा देख्छु । म आफूले आफैलाई मुर्दा देख्छु, मैले पनि धेरै ठाउँमा आवाज उठाएको छैन । निर्मलको आत्महत्या भएको हैन हत्या भएको हो अनि हत्यारा हामी सबै हौँ । निर्मल त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो, यहाँ हरेक दिन, हरसमय कसै न कसैले आत्महत्या गरिरहेका छ्न् । बस् यो संसारदेखि विरक्तिएर जुन ठाउँमा आफू जीवित रहेको अस्तित्व नै छैन त्यो ठाउँ मुर्दाघर नै हो ।
निर्मल तँ वास्तवमा जीवित छ्स्, मुर्दा त हामी रहेछौँ । तँ यो संसारबाट बिदा भएर गए पनि यो मुर्दाहरूको सहरमा मानवताको पाठ सिकाएर गएको छ्स्, तेरो आत्माले मुक्ति पाओस् । म अब यो मुर्दाहरूको सहरमा जीवित बन्ने प्रयास भने अवश्य गर्नेछु ।
भलमानसाः थारु जातिहरूले गाँउमा छानेको प्रमुख मानिस; मुखिया ।
माथिका पात्रहरूको यसभन्दा अघिको पनि कथा छ । उक्त कथा पढ्नको लागि यो लिङ्क थिच्नुहोस् : https://kavyalaya.com/ratnapark-lockdown-and-poverty/ ]